Express PCB, Flex -Rigid PCB, PCB Mgbakọ - PhiliFast
Turnkey PCB & PCBA Nrụpụta na Mgbakọ
Mmepụta PCB Kọmputa Mmepụta, SMT & ...
Turnkey PCB Assembly Electronic E Bipụtara PCB Cir ...
RF microwave PCB nwere Flash Gold Surface finish ...
mgbanwe pcb 6 Layer fpc Mgbanwe-isiike PCB nwoke ...
Pcb Multilayer PCB Prototype PCB PCB Manufacturer ...
Omenala electronic circuit osisi turnkey ọrụ ...
ada PCB osisi aluminum circuit mbadamba na PCB ma ...
PHILIFAST bụ onye nrụpụta bọọdụ sekit ọkachamara nke na -enye ọtụtụ ọrụ nrụpụta bọọdụ sekit. Dịka onye nrụpụta PCB na onye na-eweta ọrụ ọgbakọ nwere ihe karịrị afọ iri nke mbubata na mbupụ akụkọ ihe mere eme, Site na mbọ nke ndị ọrụ niile, PHILIFAST ewepụtala onye ndu teknụzụ bọọdụ sekit nke China ebipụtara.
PHILIFAST na-enye ọrụ elektrọnịkị ihe eji arụ ọrụ BOM dabara adaba, nwere usoro ọkọnọ akụrụngwa dị mma yana rụọ ọrụ nke ọma, wee chọpụta nzukọ PCB dị ọnụ ala maka ndị ahịa. Anyị nwere ndị otu injinia BOM ọkachamara ka ha nyochaa data mbụ nke ndị ahịa BOM.
Ọrụ SMT Ọgbakọ
Usoro mmepụta nke ụlọ ọrụ ahụ na -emezu ihe nchebe gburugburu ebe obibi, nke nwere ngwa nrụpụta na nnwale dị iche iche, ezigbo usoro elektrọnik, yana ule kọmputa zuru oke, nke nwere ike mezuo ihe nrụpụta nke ngwaahịa elektrọnik nke ọma. Nwee usoro njikwa ogo zuru oke na sayensị.
PHILIFAST nwere otu teknụzụ teknụzụ PCB ọkachamara na ọtụtụ ahụmịhe bara uru. Na -etinye aka na mpaghara elektrọnik dị iche iche. PCB clone bụ iji nyocha azụ na teknụzụ mmepe iji tụgharịa kọọdụ sekit, wee weghachite faịlụ PCB mbụ, faịlụ ihe (BOM), faịlụ atụmatụ na faịlụ teknụzụ ndị ọzọ, yana faịlụ mmepụta ihuenyo silk PCB, na wee megharịa ha.
Ọ bụghị naanị na PHILIFAST na-enye ndị ahịa ọrụ nrụpụta PCB na ọrụ mgbakọ, kamakwa ọ na-enye ndị ahịa ọrụ mmemme IC. Ndị otu injinịa ọkachamara anyị nwere ike ịhazi IC akpọrọ dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị. Ndị ahịa na -enye ozi ọkụ zuru oke, ntuziaka na -ere ọkụ, akwụkwọ akwụkwọ ọkụ.
Ọtụtụ mgbe, mgbe achịkọtara bọọdụ sekit ma mechaa AOI na nyocha ihu, anyị na -akwadokarị onye ahịa ka ọ nye ụzọ nnwale zuru oke iji mee nnwale arụmọrụ ikpeazụ na bọọdụ emechara tupu nkwakọ ngwaahịa na mbupu ụlọ ọrụ anyị. PHILIFAST nwere ndị otu PCB Functional Test (FCT). Nnwale arụmọrụ na -enyere anyị aka ịchọta ma mezie ọdịda akụrụngwa, ntụpọ mgbakọ ma ọ bụ nsogbu nrụpụta nwere ike tupu ebufe, ma mee nchọpụta nsogbu na ndozi dị mma.
onye bụ philifast
Kedu ihe kpatara PHILIFAST
Shenzhen Fhilifast Electronics Co., Ltd. Chọtara na 2005. Site na ihe karịrị afọ iri nke mmepe na -aga n'ihu, ụlọ ọrụ ewepụtala akụrụngwa nrụpụta kachasị elu, wee guzobe otu ndị ọrụ injinịa ọkachamara, chịkọtara ahụmịhe bara ụba nke mmepụta na njikwa n'oge mmepụta. Companylọ ọrụ anyị nwere sistemụ njikwa ogo zuru oke, usoro sistemụ ọkọnọ zuru oke, wee nweta nnukwu mmepụta. Ahịa ndị ahịa anyị na -ekpuchi ụwa niile, isi ngwaahịa na teknụzụ na -ebuga n'ahịa Europe na America. Ngwaahịa niile na -agbaso ụkpụrụ IPC na UL.
Wedata ego gị: Mgbakọ PCBA Turnkey; Ngwọta BOM iji belata ọnụ ahịa ya; Ndụmọdụ Ọkachamma Maka Nwepụta Kere Gị
Nkwa dị mma: ISO14001, IATF16949, UL asambodo; Akwadoro 100% AOI/E-Testing/X-ray/Programming Programming and Function Test
Service Ọrụ Ndị Ahịa Kachasị Mma: 24 Awa Online; Nzaghachi azụmaahịa na -abịa n'oge n'ime awa iri na abụọ; Nkwado nka na ụzụ ọkachamara;
• 2018 —— Imepe ụlọ ọrụ mmepụta Shenzhen PCBA & Turnkey.
• 2017 —— Ịbawanye ahịa na ahịrị mmepụta 5 SMT.
• 2016 —— asambodo ISO14001.
• 2015 —— Mmepe ụlọ nrụpụta PCB na Shenzhen.
• 2012 —— IATF16949, ISO13485, ISO9001, Asambodo UL.
• 2008 —— Imepe ụlọ nrụpụta PCB na Henan.
• 2005 —— PHILIFAST Eletrọniki ahụrụ.
PCB na -agbaso ISO9001, TS16949, UL, CE na RoHS Certificate. PCB SMT nzukọ Dabara ISO9001, PDCA na IPC-A-610E. Anyị na -ejere ndị ahịa anyị ozi gburugburu ụwa. Usoro njikwa njikwa anyị zuru oke na -akawanye mma nke ukwuu iji gboo ihe ndị ahịa chọrọ.
• ISO9001: Nchịkwa Ogo 2008
• Nnyocha 100% na -abata site na IQC
• Nnyocha 100% AOI
• Nnwale E-100%
• Ụkpụrụ IPCII na IPCIII maka nnabata
Anyị na -emeso ọtụtụ puku ndị ahịa kwa afọ, anyị maara ka esi ejere ndị ahịa anyị ozi nke ọma:
• Ekwela nkwa ịdị mma
• Ọnụ ego dị ala maka ọrụ omenala PCB & PCBA tụgharịrị
• Enweghị MOQ chọrọ
• 99% afọ ojuju ndị ahịa
• Ajụjụ injinia efu na nyocha DFM site n'aka ndị otu injinia ọkachamara
Kedu ihe kpatara ịchọta onye nrụpụta PCB gị na China
Usoro PCB na PCB Assembly
Kedu otu esi amalite iwu?
Biko ziga faịlụ PCB Gerber gị, Họrọ faịlụ & faịlụ/faịlụ Centroid, faịlụ BOM na email anyị: sales@fljpcb.com
Gaa na Email